WordPress: Omume 10 kachasị mma na Nchebe Weebụ | Site na Linux
WordPress: omume 10 kachasị mma n'okwu nchekwa
WordPress (WP) a maara dị ka CMS kachasị ewu ewu, n'etiti ọtụtụ ihe, ebe e mepụtara iji mesie ike na ịnweta, arụmọrụ, na ịdị mfe nke iji, ịnọ na mmepe na-aga n'ihu (5.2 nke ugbu a), nwere nnukwu obodo ndị ọrụ n'ọtụtụ asụsụ ma nwee ikike ịhazi oke site na iji nke ma ọ bụ isiokwu ndị ọzọ na mgbakwunye.
Nakwa maka ịbụ ezigbo nchekwa, ma maka nke ahụ, dịka ọ dị na ngwa ọ bụla ma ọ bụ usoro ọ bụla, a ghaghị ịgbaso ụkpụrụ omume dị mma iji nweta mmezu dị ogologo oge. Na nke a, anyị chọrọ ịnye ụfọdụ ndụmọdụ dị mkpa na nke a.
2 Ezigbo omume
2.1 1.- Mee ka nchedo gị sie ike
2.2 2.- Mara ọghọm gị
2.3 3.- Mara akụrụngwa nke ndị na-eweta Bochum gị
2.4 4.- Mara ihe omuma nke ntanetị nke onye na-eweta Bochum gị
2.5 5.- Kpachara Anya maka Gburugburu na Mmezu eji
2.6 6.- Gbalịa imelite CMS gị oge niile
2.7 7.- Achọtara m paswọọdụ kwesịrị ekwesị
2.8 8.- Na-akwado atụmatụ mgbochi mgbochi gị mgbe niile
2.9 9.- Mee ka nchekwa gị dịkwuo mkpa site na iji 2FA
2.10 10.- Jiri ngwa nche ọ bụla dị mkpa
WP bụ CMS kachasị ewu ewu maka iwulite weebụsaịtị, ọ bụkwa na-abụkarị a Ugboro lekwasịrị anya nke kọmputa ọgụ, ya mere, e wezụga ya mgbe nile mmelite, chọrọ mmezi oge niile, mmelite, na usoro nchekwa na si otú a zere adịghị ike n'ihi enweghị ike na tinye-ons, okwuntughe na-adịghị ike, ngwanrọ ochie, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ya bụ, nweta belata oke ngwangwa gị na mwakpo ọ bụla ma ọ bụ nke a na-atụghị anya ya.
Tụkwasị na nke a, WP dị ka Sistemụ Njikwa Ọdịnaya ọ bụla (CMS) na-enye gị ohere ịme ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma wee websaịtị wee tinye ya n'ịntanetị. Ike ya nke ukwuu maka ọrụ na uto, site na modulu, isiokwu na-arụkọ ọrụ, na-eme ka ọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla iji nweta ọrụ a mana na-enweghị mkpa maka afọ agụmakwụkwọ dị ogologo nke a na-achọkarị maka nke a.
Otú ọ dị, mmetụta dị n'akụkụ ọ dịghị ihe na-enye obi ụtọ nke nwere ike ibilite na nke a, ọ nwere ike bụrụ na ụfọdụ ndị njikwa nke ngwa ọrụ kwuru, na-emekarị gafere, usoro ndị dị mkpa iji hụ na ebe nrụọrụ weebụ mepụtara ma ọ bụ chekwaa echedoro. N'ihi nke a, ọ dị mkpa iburu n'uche ụfọdụ izugbe na usoro ụfọdụ (omume dị mma), gbasara WP ma ọ bụ CMS ọ bụla na weebụsaịtị iji chebe ya.
1.- Mee ka nchedo gị sie ike
N'ezie, WP gafere 30% karịa ntọala nke weebụsaịtị na-arụ ọrụ na todayntanetị taa, nke mere ka ọ bụrụ ihe kachasị amasị ndị mwakpo na / ma ọ bụ ndị na-awakpo (hackers / crackers) na ebumnuche dị mma ma ọ bụ nke ọjọọ. Ya mere, a ga-anwale ihe ngwangwa ama ama ama na saịtị yiri ya na WP na saịtị ndị ọzọ yiri ya na WP.
Yabụ ọ bụrụ na ijikwa na / ma ọ bụ jiri otu ma ọ bụ karịa webụsaịtị (s) na WP gbaa mbọ hụ na ị na-akpachapụ anya nke ọma, ma nke ọma na nchekwa nke ọnlaịnụ ha. Buru n'uche na ọtụtụ nyocha mmebi iwu nyochara ma kọọ na weebụsaịtị nwere WP enweghị obere ma ọ bụ ihe ọ bụla metụtara isi nke ngwa ahụ n'onwe ya, mana ọtụtụ ihe metụtara ihe niile metụtara mmejuputa ya, nhazi na ndozi izugbe, rụrụ na ezighi ezi. site n'aka ndị mmepe ma ọ bụ ndị ọchịchị. '
2.- Mara ọghọm gị
WordPress nwere ihe dị ka 4.000 mara nche ọma, kesara dị ka ndị a: WP Core (37%), Plugins (52%) na Gburugburu (11%), dị ka otu akụkọ si na weebụsaịtị WPScans, bụ nke a na-akpọ ugbu a WPSec (kamgbe 01-05-2019). Nyochaa nsogbu nchebe nke chere ihu na ebe nrụọrụ weebụ gi ma choo ihe ngwọta iji dozie nsogbu ndi a. Zere ịgba ọsọ nke nchekwa WP Core, ma ọ bụ plugins na gburugburu ya.
Lekwasị anya na isiokwu nche na-esote na WP ma ọ bụ weebụsaịtị gị, ya bụ, na Differentdị dị iche iche nke Mwakpo si:
Ike ọjọọ: Ume nchebe na nbanye gị na peeji nke.
Ntinye faịlụ: Iwusi nchekwa nke faịlụ wp-config.php gị.
Ọgwụ SQL: Iwusi nchekwa nke nchekwa data MySQL gị na WP.
Obe Cross Site: Ime ka nchekwa nke WP plugins rụọ ọrụ.
Ọrịa malware: Ikwusi ike na nchekwa nke weebụsaịtị gị iji gbochie nnweta na-enwetaghị ikike, ntinye malware na nchịkọta nke data nzuzo site na koodu ndị a na-adịghị mma. Malware ma ọ bụ ọgụ na-emekarị bụkarị ụdị: Backdoor, Spam SEO, HackTool, Mailer, Defacement and Phishing. Lee iji chebe saịtị gị megide ụdị nke malware ma ọ bụ ọgụ a.
Cheta na obula webusaiti obula mebiri, ya SEO ogo ga-ata ahụhụ. N'ihi na engines ọchụchọ na-abanye ngwa ngwa banye na ebe nrụọrụ weebụ mebiri emebi ka ihe nchọgharị ga-egosi ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị nye ndị ọbịa ma ọ bụ gbochie ikike ha nwere ịnyagharịa saịtị ndị ahụ.
3.- Mara akụrụngwa nke ndị na-eweta Bochum gị
Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-eji nnabata ndị ọzọ, ya bụ, akwụ ụgwọ na mpụga nke akụrụngwa gị, egbula ụgwọ iji hụ na ọrụ dị mma sitere n'aka ndị na-eweta gị. Karịsịa, ọ bụrụ na ọ kwadoro saịtị ya n'okpuru atụmatụ "òkè Bochum".
Ebe ọ bụ adịghị mma 'nkesa Bochum' nwere ike ime ka saịtị gị dịkwuo mfe mgbe otu n’ime ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ echekwara na otu ihe nkesa ahụ mebiri. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na e websaịtị weebụ na sava na "Bochum ekerịta", ndị mwakpo ahụ nwekwara ike ịnweta weebụsaịtị ndị ọzọ na data ha.
4.- Mara ihe enkọwapụta teknụzụ weebụ site na Bochum na-eweta gị
N'ihe banyere ịtụle ndị na-eweta Bochum, akụrụngwa ya abụghị ihe niile. Nkọwapụta teknụzụ ntanetị nke onye na-eweta gị na-eweta iji nweta nchebe ka mma maka ebe nrụọrụ weebụ akwadoro dịkwa mkpa. Jide n'aka na ọ na - agbaso usoro nduzi nchedo akwadoro maka ị nweta websaịtị gị:
Mfe ntinye nke asambodo SSL
Nchịkwa ọrụ nke nsụgharị ngwanrọ sava weebụ.
Ndekọ nke nnweta na weebụsaịtị
Nchekwa oge a na-echekwa nche
Nchọpụta ọjọọ emebiri ihe
Nkwado maka SFTP (ọ bụghị naanị FTP), TLS 1.2 na 1.3, yana maka PHP 5.6, opekata mpe, ọ bụ ezie na 7.0 gaa n'ihu ka akwadoro.
Ihe a niile dị mkpa, na opekempe, iji bulie nchekwa nke weebụsaịtị gị ma ọ bụ na-enweghị WP dị ka CMS eji.
5.- Kpachara Anya maka Gburugburu na Mmezu eji
Ihe mgbakwunye na isiokwu ndị arụnyere nwere ọtụtụ ihe na ọkwa nchekwa. Gbalịa iji naanị WP ma ọ bụ WP ndị a kwadoro na gburugburu na plugins, ebe nchekwa azụmahịa ama ama, ma ọ bụ site n'aka ndị mmepe amaara ama. Ebe ọ bụ na ọtụtụ n’ime ha (asambodo) nwere ike ịnwe koodu ọjọọ.
Ọ baghị uru na ole ị chebere weebụsaịtị gị na WP ma ọ bụrụ na ị wụnye malware. Mee nyocha gị tupu ibudata ma wụnye isiokwu na plugins ọ bụla, ma ọ bụ onye nrụpụta ha ma ọ bụ onye nkwalite na ebe nrụọrụ weebụ, ma nwee ebe obibi gị na ndị nweere onwe ha ma ọ bụ ndị nwere ego.
6.- Gbalịa imelite CMS gị oge niile
Mmelite na ntanetị weebụ gị dị ezigbo mkpa maka nchekwa gị. Ma obu WP CMS gị ma ọ bụ na ọ bụghị, ụdị ochie nke Core, Theme, ma ọ bụ plugins gị nwere ike iduga gị ịnwe nsogbu mara na weebụsaịtị gị. N'ihe banyere WP, nke bụ oghe oghe, enwere otu ndi ewepụtara maka okwu a n'ime Isi nke ngwa ahụ.
A na-edozi nsogbu ọ bụla nchedo achọpụtara na WP ma kpochapụ ya ozugbo iji dozie nsogbu ọhụụ ọ bụla achọpụtara na WP. N'ihi mmelite ahụ WP na isiokwu ya niile na plugins na nsụgharị kachasị ọhụrụ bụ akụkụ dị mkpa nke atụmatụ nchekwa nke ọma.
7.- Achọtara m paswọọdụ kwesịrị ekwesị
Ogo ma ọ bụ ike nke okwuntughe anyị na weebụsaịtị dị ezigbo mkpa. Gingbanye n'ime weebụsaịtị anyị bụ isi ihe mgbaru ọsọ maka iji ike eme ihe, n'ihi na ọ na-enye ohere kachasị mfe na peeji nke nchịkwa weebụsaịtị gị.
Mwakpo ike ọjọọ bụ usoro kachasịkarị iji nbanye nbanye gị, na-achọpụta aha njirimara na paswọọdụ iji nweta ebe nrụọrụ weebụ. N'okwu WP akọwapụtara, na ndabara ọ naghị ejedebe ọnụọgụ nbanye nbanye nke mmadụ nwere ike ịme, yabụ, ihe kachasị atụ aro bụ iji paswọọdụ dị mgbagwoju anya maka nbanye nke onye nchịkwa WP gị.
Mgbe ị na-ahọrọ paswọọdụ, buru n'uche ihe ndị a bụ isi atọ dị mkpa dabere na usoro CLU (Mgbagwoju, Ogologo, Pụrụ Iche):
Mgbagwoju: Okwuntughe kwesiri ibu ihe dika o kwere mee ma o nweghi ihe jikoro ya na Onye Nchịkwa Web ma obu weebụsaịtị.
Ogologo: Okwuntughe ga-abụrịrị mkpụrụedemede iri na abụọ ma ọ bụ karịa n’ogologo. Ma wusiri ike na mgbochi ma ọ bụ na-agaghị emeli na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-emezughị njikọ mgbalị.
Naanị: Ejikwala okwuntughe. Okwuntughe obula aghaghi idi iche na oge. Iwu a dị mfe na - egbochi mmetụta nke paswọọdụ ọ bụla mebiri emebi.
Nkwanye: Jiri paswọọdụ njikwa dịka “LastPass” (ọnlaịnụ) na “KeePass 2” (na-anọghị n'ịntanetị) iji mepụta ma chekwaa okwuntughe gị niile n'usoro ezoro ezo.
8.- Na-akwado atụmatụ mgbochi mgbochi gị mgbe niile
Ọ bụrụ na ị jiri WP cheta na ọ nweghị sistemụ nchekwa arụpụtara. Gụnye otu dị ka ihe kacha mkpa, yabụ na ị nwere nkwado ndabere nke weebụsaịtị gị. Ndabere dị oke egwu na atụmatụ nchekwa izugbe iji mejuputa.
Echefula na ikwesighi naanị kwado ebe nrụọrụ weebụ gị na ọdụ data gịkama ha nile ntọala nke sava niile site na akpaghị aka aga-eme na n'ihendesịta ma ọ bụ cloned oyiyi usoro, ikwado ndị dị mkpa mweghachi na re-nrụnye na nke kasị nso-ekwe omume oge.
9.- Mee ka nchekwa gị dịkwuo mkpa site na iji 2FA
Mee ka nbanye nchịkwa WP gị ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ gị site na iji usoro nyocha abụọ (2FA), nke bu otu uzo kacha mma iji chebe webụsaịtị gị taa. Ihe nyocha abuo abuo na-agbakwunye nchebe nke ntinye aka na nbanye gi na ebe nrụọrụ weebụ, site na ichoro ka ojiji okwuntughe gi choro ihe omuma ndi ozo site na ngwaọrụ ozo, dika smartphone gi.
N'ihe banyere WP nke na-adịghị arụ ọrụ a na ndabara Embed otu site na iji ngwa mgbakwunyedị ka iThemes Nche ịgbakwunye otu.
10.- Jiri ngwa nche ọ bụla dị mkpa
Imirikiti CMS dị ka WP na-eji ngwa mgbakwunye iji nwekwuo ikike nchekwa nke onwe ha. N'okwu a kapịrị ọnụ nke WP, a na-atụ aro iji ngwa mgbakwunye nche akpọrọ iThemes Security. iji tinyekwuo nchebe na weebụsaịtị gị. Ihe mgbakwunye a na-egbochi WP, na-edozi oghere ndị a ma ama, na-akwụsị mwakpo akpaaka, ma na-ewusi nzere ndị ọrụ.
Ọ nwere ụdị nke anaghị akwụ ụgwọ (iThemes Security) yana ụdị akwụ ụgwọ (iThemes Security Pro) nke doro anya na-enyekwu nchebe atụmatụ dị ka 2FA, ndokwa malware nyocha, ndebanye aha njirimara, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Ma ọ karịrị WP ma ọ bụ CMS ọzọ, ịnwere ike izere ọtụtụ nsogbu nchekwa weebụsaịtị naanị site na isoro usoro kachasị mma ma ọ bụ nke ọma. Ebe nrụọrụ weebụ gị kwesịrị ma ga-enwerịrị nchebe dị mkpa iji kwado ma ọ bụ belata mbibi ya n'oge ndị a nke nsogbu nke ndị na-agba ọsọ na ndị na-agbawa agbawa.
N'ikpeazụ yana dị ka mgbakwunye, anyị nwere ike ikwu na ị na-agụ nke a ọzọ isiokwu na anyị blog na isiokwu iji wusie nchebe nke ebe nrụọrụ weebụ gị ike, akpọ: Linux ikike maka ndị nchịkwa sistemụ na ndị mmepe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » WordPress: omume 10 dị mma maka usoro nchekwa maka weebụsaịtị